के तपाई घाँटी दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? समाधान खोजौं! – Noor Health Life
के तपाई घाँटी दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? समाधान खोजौं!
हाम्रो घाँटी र ढाडहरू स-साना सिलहरूले बनेका हुन्छन् जुन हामीलाई मेरुदण्ड जस्तो देखिन्छ। घाँटी दुख्ने धेरै कारण हुन सक्छ र एक धेरै सामान्य समस्या हो। हामी मध्ये धेरैजसो आफ्नो बारेमा तस्वीर चित्रण गर्न को लागी एक आराम रवैया छ। यहाँ केहि कारणहरू छन्: नूर हेल्थ लाइफ सधैं तपाईंको सेवामा छ। केवल नूर हेल्थ लाइफलाई समर्थन गर्नुहोस् र नूर हेल्थ लाइफलाई गरिबहरूलाई मद्दत गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
* तनाव र चिन्ता
गलत घाँटी सुत्ने स्थिति
● गलत मुद्रा
* थकान वा मांसपेशी तनाव
* यो रोगमा मस्तिष्क र सेरिबेलम वरपरको झिल्लीमा सूजन हुन्छ र कडा टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने र घाँटीमा कडा अकस्मात् हुने जस्ता लक्षण देखिन्छन्।
▶ यो दुखाइसँगै हृदयाघात पनि हुन सक्छ तर यसको साथमा पसिना आउने, बान्ता हुने, वाकवाकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने र बङ्गारा दुख्ने जस्ता अन्य लक्षणहरू देखापर्छन्।
घाँटी दुख्ने केही सामान्य कारणहरू निम्न छन्:
● सूजन – उदाहरण को लागी स्पन्डिलाइटिस घेरिएको
घाँटी समस्याको सामान्य लक्षणहरू निम्न हुन्:
* दुखाइ र तनाव : टाउकोलाई लामो समयसम्म एउटै स्थानमा राख्दा यस प्रकारको टाउको दुखाइ बढ्छ।
* घाँटी सुन्निने वा सुई भित्र टाँसिएको: यो हातसम्म महसुस गर्न सकिने स्नायुमा दबाबको कारणले हुन्छ।
● क्लिक गर्दा वा आवाजको आवाज: यो आवाजलाई चिकित्सकीय भाषामा क्रिप्स भनिन्छ र यो मांसपेशी र हड्डीहरू एकअर्काको माथि रगड्दा उत्पन्न हुन्छ। र यो लक्षण प्रायः रातमा देखिन्छ।
* चक्कर लाग्नु र बेहोस हुनु: कशेरुका धमनीहरूमा दबाबले बेहोशी र चक्कर आउन सक्छ।
* मांसपेशी तनाव: यो भावना मांसपेशिहरु मा कठोरता को कारण हो।
घरमै आफ्नो घाँटीको उपचार गर्नुहोस्
घाँटी दुखाइ सामान्यतया गम्भीर समस्याको कारणले हुँदैन र सामान्यतया4देखि6हप्ता भित्र समाधान हुन्छ। निम्न अभ्यासहरू उपयोगी हुन सक्छ:
● राम्रो पालो:
आफ्नो टाउकोलाई एक तर्फ घुमाउनुहोस् जब सम्म मांसपेशिहरु तनाव महसुस गर्न सुरु गर्न को लागी र5सेकेन्ड को लागि त्यो स्थिति मा रहनुहोस् र त्यसपछि अर्को तिर उही प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्।
● निक टिल्ट डाउन:
बिस्तारै आफ्नो घाँटीलाई आफ्नो छातीतिर झुकाउनुहोस् र केहि क्षणको लागि त्यस स्थितिमा छोड्नुहोस् र यो प्रक्रिया धेरै पटक दोहोर्याउनुहोस्।
● राम्रो झुकाव:
आफ्नो टाउकोलाई एक काँधमा झुकाउनुहोस् जबसम्म यो फैलिएको महसुस हुँदैन र टाउकोलाई5सेकेन्डसम्म एउटै स्थितिमा राख्नुहोस् र त्यसपछि अर्को तिर उही प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्।
● राम्रो स्ट्रेच:
आफ्नो कम्मरलाई पछाडि धकेल्दै आफ्नो मांसपेशीहरू तन्काउनुहोस् र5सेकेन्डसम्म त्यही स्थितिमा रहनुहोस् र यो प्रक्रिया5पटक दोहोर्याउनुहोस्।
घाँटी कठोरताको उपचार:
● तातो वा आइस प्याक:
20 मिनेटको आइस प्याकले सूजनलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सक्छ। त्यसैगरी तातो पानीले नुहाउँदा पनि शान्त महसुस हुन्छ ।
एक विशेषज्ञबाट मसाज पनि धेरै आराम हुन सक्छ।
* OTC औषधि प्रयोग गर्नुहोस्।
यस प्रक्रियामा, हाम्रो मांसपेशिहरु को विभिन्न दबाव बिन्दुहरु मा राम्रो सुई सम्मिलित गरिन्छ, जसले एक व्यक्ति धेरै हदसम्म फरक महसुस गराउँछ।
तिनीहरूले मांसपेशिहरु र जोर्नीहरु को एक विशेष तरिका मा उपचार गर्न सक्छन्, तर यो पहिले एक डाक्टर संग परामर्श गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
तनावले घाँटीको तनाव पनि निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले तपाईंको तनाव कम गर्ने गतिविधिहरूमा भाग लिनुहोस्।
आफ्नो सुत्ने वातावरण सुधार्नुहोस्:
* राम्रो गद्दा छनोट गर्नुहोस्
* टाउको माथि राखेर वा ब्याक माथि राखेर सुत्नुहोस्
* घाँटीको लागि विशेष तकिया प्रयोग गर्नुहोस्
* सुत्नुअघि आफ्नो शरीरलाई आराम गर्नुहोस्
घाँटीको दुखाइ सामान्यतया यी विधिबाट निको हुन्छ तर ढिलो भएमा चिकित्सकको सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ।काँधको दुखाइ मांसपेशी, हड्डी वा वरपरको भागमा भएमा यो दुखाइ सुरु भयो भने कसैलाई सावधानीपूर्वक काम गर्न गाह्रो हुन्छ। सबै उमेरका मानिसलाई काँध दुख्ने समस्या हुन्छ।लामो समयसम्म ल्यापटप, ट्याब्लेट वा स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने मानिसलाई यो समस्या बढी हुने गर्छ। काँध दुख्ने धेरै सम्भावित कारणहरू छन्। सबैभन्दा सामान्य कारण तन्तु वा मांसपेशीमा चोटपटक हुन सक्छ। दुखाइको अन्य कारणहरूमा जोर्नी रोग, हड्डी भाँच्नु, सिलहरू ढिलो हुनु वा काँध चिसो हुनु समावेश छ। घाँटीको मुहर, मुटु, कलेजो र पातको रोगले पनि काँध दुख्ने गर्छ। दुखाइका लक्षणहरूमा सुन्निने र काँध सार्न कठिनाइ समावेश छ। सानातिना दुखाइको पनि घरमै उपचार गर्न सकिन्छ।दुखाइ गम्भीर छ भने डाक्टरसँग परामर्श लिनुपर्छ।
काँध दुख्ने घरेलु उपचार
चिसो घाउ काँध दुखाइ को लागी राम्रो छ। प्रभावित क्षेत्रमा चिसो घाउ सुनिन्छ जसले जलन र असुविधा कम गर्दछ।
। प्लास्टिकको झोलामा आइस क्यूब्स राख्नुहोस् र पातलो तौलियामा बेर्नुहोस्।
प्रभावित क्षेत्रमा दस देखि पन्ध्र मिनेटको लागि छोड्नुहोस्।
यो एक दिन धेरै पटक गर्नुहोस्।
चिसो पानीमा तौलिया भिजाएर पनि सुकाउन सकिन्छ।
तातो स्की दुखाइको उपचारमा पनि उपयोगी छ। दुखाइ, जलन र सूजन कम गर्न मद्दत गर्दछ। चोट लागेको २ घण्टा पछि तातो स्कीइङ गर्नु राम्रो हुन्छ। न्यानो आकाश पनि मांसपेशिहरु तन्काउन उपयोगी छ।
। तातो पानीको झोलामा तातो पानी भर्नुहोस् र काँध निचोड्नुहोस्। यो गर्नको लागि, आरामसँग सुत्नुहोस् र दस देखि पन्ध्र मिनेटको लागि दिनमा धेरै पटक स्की गर्नुहोस्।
हल्का तातो नुहाउनुहोस् र पाँच देखि दस मिनेटको लागि पानी थप्नुहोस्। पानी हाल्दा सीधा उठ्नुहोस्। यो दिनमा दुई पटक गर्नुहोस्।
दबाब भनेको दुख्ने भागमा धकेल्नु हो। जसले सूजन कम गर्छ । ब्यान्डेजले काँधमा धेरै समर्थन र आराम दिन्छ।
तपाईंले प्रभावित क्षेत्रमा न्यानो पट्टी लगाएर दबाब दिन सक्नुहुन्छ। दुखाइ र सुन्निने कम गर्नको लागि प्रभावित क्षेत्रमा केही दिनसम्म पट्टी बाँध्नुहोस्। आराम गर्नको लागि आफ्नो काँधलाई तकियामा राख्नुहोस्।
रगतको प्रवाहलाई असर पार्ने गरी ब्यान्डेजलाई धेरै कडासँग बाँध्नु हुँदैन।
एप्सम नुन म्याग्नेसियम सल्फेटबाट बनाइन्छ। दुखाइ कम गर्छ। रक्त परिसंचरण सुधार गर्दछ र मांसपेशी तनाव कम गर्दछ।
बाथटबलाई मनतातो वा मध्यम तातो पानीले भर्नुहोस्।
दुई कप एप्सम नुन थप्नुहोस् र भंग गर्नुहोस्।
। यस पानीमा बस्नुहोस् र आफ्नो काँधलाई २० देखि पच्चीस मिनेटसम्म पानीमा डुबाउनुहोस्।
हप्तामा तीन दिन गर्नुहोस्।
मसाजले ढाडको दुखाइ पनि कम गर्छ। हल्का मसाजले मांसपेशी तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ। यसको अतिरिक्त, यसले रक्त परिसंचरण बढाएर सूजन र कठोरता कम गर्दछ। राम्रो मसाज गर्न सक्ने कसैबाट मसाज लिनुहोस्। मसाज गर्न जैतून, तिल वा तोरीको तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि मसाज गर्दा दुख्छ भने, मसाज नगर्नुहोस्।
दुई चम्चा बेसार र एक वा बढी चम्चा नरिवलको तेल मिसाएर पेस्ट बनाउनुहोस्। पेस्टलाई प्रभावित क्षेत्रमा सुकाउन अनुमति दिनुहोस्। मनतातो पानीले कुल्ला गर्नुहोस्। यो दिनमा दुई पटक गर्नुहोस्।
। एक कप दूधमा एक चम्चा बेसार मिसाएर उमाल्नुहोस्। मह जोड्नुहोस् र मीठो बनाउनुहोस्। दिनमा दुई पटक पिउनुहोस्।
तातो पानीको बाथटबमा दुई कप शुद्ध स्याउ साइडर भिनेगर मिलाउनुहोस्।
यस पानीमा काँधहरूलाई बीस देखि तीस मिनेटसम्म राख्नुहोस्। यो दिनमा एक पटक गर्नुहोस्।
एक गिलास मनतातो पानीमा एक चम्चा भिनेगर र थोरै मह मिसाएर दिनमा दुई पटक पिउन सक्नुहुन्छ।
दैनिक दुईदेखि तीन कप अदुवाको चिया पिउनुहोस्।
चिया बनाउन एक चम्चा अदुवालाई डेढ देखि दुई कप पानीमा १० मिनेट उमालेर छानेर मह मिसाएर पिउनुहोस् ।
प्रभावित क्षेत्रलाई सकेसम्म आराम गर्नुहोस्।
सुत्दा, काँधमा झुक्नुहोस् र क्रोच राख्नुहोस्।
प्रभावित क्षेत्र सार्न हल्का व्यायाम गर्नुहोस्।
मनतातो पानीमा कागती मिसाएर दिनमा दुई वा तीन पटक पिउनुहोस् ताकि जोर्नीमा मिनरल्स जम्मा नहोस् जसले गर्दा दुखाइ हुन्छ।
धुम्रपान वा धुम्रपान नगर्नुहोस् किनभने यसले घाउ निको हुनमा बाधा पुर्‍याउँछ। थप प्रश्न र उत्तरहरू प्राप्त गर्न तपाईंले नूर हेल्थ लाइफसँग इमेल र व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। noormedlife@gmail.com